"နှစ်သစ်အစမှာ ငါးစာကျွေးကာကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ပူံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှလာတဲ့ဆောင်းဝတ်ရည်မေ'' - Cele Gabar
“နှစ်သစ်အစမှာ ငါးစာကျွေးကာကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ပူံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှလာတဲ့ဆောင်းဝတ်ရည်မေ”
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသမီးလေးဆောင်းဝတ်ရည်မေကတော့ လက်ရှိမှာပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်လက်လို့ဆိုရမှာပါနော်။ ဆောင်းဝတ်ရည်မေလေးကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေသာမက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ပါဝင်လာကာ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိနေတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်လို့ဆိုနိုင်နေပါပြီနော်။
သူများနဲ့မတူတဲ့ ချစ်စရာစကားပြောပုံလေးနဲ့အတူ ဆောင်းဝတ်ရည်မေကတော့ ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးအတိုင်း ဘာခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုမှမလုပ်ဘဲ ချောမောလှပနေတဲ့ မင်းသမီးလေးပါပဲ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံး နဲ့ ထူးထူးခြားခြား စကားပြောပုံလေးတွေက ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေသာမက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကတောင် ချစ်ခင် အားပေးရသူလေး လို့ ဆိုရမှာပါ။
လက်ရှိမှာလည်းသူမပါဝင်ထားတဲ့ ”ဆုတောင်း” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုပရိသတ်တွေကနှစ်သက်သဘောကျလျက်ရှိတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့” ငါးစားကျွေး ကုသိုလ်ယူ နှစ်ဆန်းကုသိုလ်…. 💓”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ငါးစာကျွေးကာကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေဘးတွေကိုဝေမျှခဲ့တာပါ။CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း တုတုလေးရဲ့ငါးစာကျွေးကုသိုလ်အလှူလေးကို သာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါဦးနော်။
“ႏွစ္သစ္အစမွာ ငါးစာေကြၽးကာကုသိုလ္ယူခဲ့တဲ့ပူံရိပ္ေလးေတြကို ေဝမွ်လာတဲ့ေဆာင္းဝတ္ရည္ေမ”
CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ဇာတ္လမ္းတြဲမင္းသမီးေလးေဆာင္းဝတ္ရည္ေမကေတာ့ လက္ရွိမွာပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ မင္းသမီးေလးတစ္လက္လို႔ဆိုရမွာပါေနာ္။ ေဆာင္းဝတ္ရည္ေမေလးကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြသာမက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာလည္း ပါဝင္လာကာ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ရွိေနတဲ့ မင္းသမီးတစ္လက္လို႔ဆိုႏိုင္ေနပါၿပီေနာ္။
သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ ခ်စ္စရာစကားေျပာပုံေလးနဲ႔အတူ ေဆာင္းဝတ္ရည္ေမကေတာ့ ကိုရီးယားမင္းသမီးေလးအတိုင္း ဘာခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈမွမလုပ္ဘဲ ေခ်ာေမာလွပေနတဲ့ မင္းသမီးေလးပါပဲ။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အၿပဳံး နဲ႔ ထူးထူးျခားျခား စကားေျပာပုံေလးေတြက ေယာက်ာ္းေလးပရိသတ္ေတြသာမက မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြကေတာင္ ခ်စ္ခင္ အားေပးရသူေလး လို႔ ဆိုရမွာပါ။
လက္ရွိမွာလည္းသူမပါဝင္ထားတဲ့ ”ဆုေတာင္း” ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေလးကိုပရိသတ္ေတြကႏွစ္သက္သေဘာက်လ်က္ရွိတာပါ။ဒီေန႔မွာေတာ့” ငါးစားေကြၽး ကုသိုလ္ယူ ႏွစ္ဆန္းကုသိုလ္…. 💓”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ငါးစာေကြၽးကာကုသိုလ္ယူခဲ့တဲ့ပုံရိပ္ေလဘးေတြကိုေဝမွ်ခဲ့တာပါ။CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း တုတုေလးရဲ႕ငါးစာေကြၽးကုသိုလ္အလႉေလးကို သာဓုေခၚခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Previous post နာမည်ကျော် Coachella ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးမှာ ပါဝင်သွားမယ့် aespa
Next post ပုဂံမြို့ဟောင်း ဘုရားဘေးက လမ်းဘေးလေလွင့်ခွေးလေးတွေအတွက် အဟာရဒါနအလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လှအဉ္ဇလီတင့်